Manchester United oo wada-xaajood heshiis kordhin ah kula jirta labo ka mid ah xiddigaheeda… (Bruno iyo…) – Gool FM
(Manchester) 16 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wada xaajood heshiis kordhin ah kula jirta xiddigeeda khadka dhexe ka ciyaara ee Bruno Fernandes sida uu sheegay joornaalistaha ka faallooda suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano.
Joornaalistaha ayaa sheegay inay meel wacan marayaan wada hadallada u dhexeeya labada dhinac sidoo kalena laga filayo inay guuleysato aragtida Man United ee heshiis kordhinta Bruno.
Wada xaajoodka u dhexeeya labada dhinac ayaa soo bilawday bishii July, waxaana haatan lagu soo warramayaa inuu 27-sano jitka reet Portugal ku dhowyahay inuu aqbalo inuu heshiis cusub saxiixo si uu sanado kale baaqi ugu sii ahaado Old Trafford.
Dhinaca kale, waxaa la warinayaa inay naadiga Red Devils wada hadallo la bilawday kubbad qaabeeyaheeda Paul Pogba kaasoo qanfaraaskiisu dhacayo dhammaafka xilli ciyaareedkan.
Wararka qaar ayaa sheegaya inuu 28-sano jirka Faransiiska ah uu diyaar u yahay sii joogista kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League.